Inqaba sinombuki zindwendwe onguΕλενη
Ukuya kwimbali yale ndawo ikhethekileyo nengenakulibaleka. I-Kalfakakos Tower ibekwe kwindawo yokuhlala yaseLakonia Mani, eVathia. Indawo yokuhlala ekhangeleka ngathi yiAcropolis eyakhelwe phezu kwenduli kwaye ibekwe nje iikhilomitha ezi-3 ukusuka elwandle.
Inqaba yaseKalfakakou imi ngokuzidla ngexesha kwicala elingasentshona lendawo yokuhlala inika umbono omangalisayo woLwandle lweMeditera. Yahlaziywa ngo-2021 ukuze kuhlaliswe abathandi bendalo abathanda isiko.
Le ndlu ibekwe kumgangatho ophantsi wenqaba, inegumbi eliligumbi kunye negumbi lokuhlala elinebhedi ephindwe kabini kunye nesofa eya kuba yibhedi enye ukuze ikwazi ukuhlalisa ngokukhululekileyo abantu ababini kunye nabathathu. Ikwanayo nekhitshi, igumbi lokuhlambela kunye nendawo yangaphandle kunye ne-ambrela kunye netafile apho umbono uyamangalisa.
Ukwakhiwa kwenqaba kwaqala malunga ne-1650 ukuya kwi-1730 apho yagqitywa khona kwaye ihlala injalo kude kube ngoku. Yinqaba yemfazwe yaseMani eyakhiwe ngokwezidingo zelo xesha. Isanda kulungiswa ngothando olukhulu kunye nentlonipho yokwakhiwa kwendawo. Nangona isisakhiwo esinqatyisiweyo esakhelwe iinjongo zokuzikhusela, asiswele izinto ezisisiseko. Ukuhlala kujongeka njengokuhamba kwexesha elinikezela ngamava angenakulibaleka.
Ukwakhiwa kwenqaba kwaqala malunga ne-1650 ukuya kwi-1730 apho yagqitywa kwaye ihlala injalo kude kube ngoku. Yinqaba yemfazwe yaseMani eyakhiwe ngokwezidingo zelo xesha. Isanda kulungiswa ngothando olukhulu kunye nentlonipho yokwakhiwa kwendawo. Nangona isisakhiwo esinqatyisiweyo esakhelwe iinjongo zokuzikhusela, asiswele izinto ezisisiseko. Ukuhlala kujongeka njengokuhamba kwexesha elinikezela ngamava angenakulibaleka.
Umbuki zindwendwe ngu- Ελενη
Inombolo yomthetho: 00001253306
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vathia